Fa maninona ny alikako no mihodina anaty faribolana? | Tontolo alika
Fa maninona ny alikako no mihodina anaty faribolana?
Azonao antoka fa voamarikao fa ny alikantsika dia mametraka ny lohany manokana amin'ny rindrina, zavatra izay tsy dia fahita firy ary midika izany fa misy zavatra mitranga amin'ny biby, na dia misy zavatra hafa ahafahantsika mitarika ny tenantsika hahalala raha misy alika mitranga, dia raha ity manomboka mihodinkodina manodidina.
Voalohany indrindra, raha manomboka manao an'io ny alika dia tsy maintsy jerentsika raha misy ifandraisany amin'ny fihetsika sasany manoloana ny anton-javatra ivelany azy io tranga io, ohatra, raha manenjika zavatra iray izy, raha mijery ny valin'ny valindrihana na zavatra Similary. Raha mandeha anaty faribolana ny alikanao nefa tsy misy fitsabatsabahana avy any ivelany dia tokony hangataka fanampiana amin'ny mpitsabo biby ianao, izany no sasany amin'ireo antony mahatonga ny alikanao mandehandeha.
Tokony hotadidinao fa ity fihetsika ity, rehefa manana an'io rehefa olon-dehibe izy, dia mety tsy dia mampatahotra kely toy ny rehefa alika kely. Raha ny marina dia misy antony vitsivitsy mahatonga ny alika olon-dehibe afaka mihodina sy manaikitra ny rambony. Ary ireto no:
1 Antony lehibe
1.1 Olana ara-pahasalamana
1.2 Taona mandroso
1.3 Fihetsika manery
1.6 Ny hazakazaka
2 Antony ara-batana
3 Antony ivelany
4 Antony tsy dia misy ifandraisany firy
4.1 Tena kely izy io
5 Inona no hatao raha antitra ny alikako ary mandehandeha manodidina?
6 Fa maninona ny alika no tsy mijanona mandehandeha manerana ny trano?
7 Mitodika any aminy ny alika ary manaikitra ny rambony
8 Fa maninona ny alika no mandehandeha ary koa amin'ny boribory?
9 Alika tsy rototra, mety ho antony mahatonga azy mandehandeha faribolana ve izany?
10 Senile dementia, mety ho antony mahatonga anao mandeha anaty faribolana ve izany?
11 Aretina mety hahatonga ny alikako hitety faribolana
12 Ny alikako dia mihodina ary milatsaka
13 Rehefa mety hiteraka ahiahy manodidina izany
Raha mandeha mihodinkodina ny alikanao nefa tsy misy fanelingelenana any ivelany, tokony hangataka ny fanampian'ny mpitsabo ianaoIreo no antony sasany mahatonga ny alikanao mandehandeha faribolana.
Ento any amin'ny mpitsabo biby ny alikanao mba hialana amin'ny olana ara-pahasalamana, toy ny raha marary ny alika dia afaka mandeha anaty faribolana izy mba hanehoana tsy fahazoana aina. Ny aretina sasany mety iharan'ny alika dia ny aretin-tsofina, ny aretin'ny maso na ny aretin-kozatra.
Toy ny olona, ny alika antitra koa dia mijaly noho ny fahaverezan'ny zezika, izany dia mety hiteraka fikorontanan-tsaina na fanadinoana. Ny alika dia afaka mandeha anaty faribolana sahala amin'ny hoe very, mitazam-baravarana na zoron'ny trano ary mampiseho fanovana amin'ny toetrany.
Mety hadinonao ny toerana misy ny sakafo, ny rano na ny aiza na aiza na aiza na aiza satria ny alika zokinjokiny dia mila mandeha matetika any amin'ny mpitsabo biby mba hahazoana antoka fa miovaova ny fahasalamany, koa tadidio fa hikarakara tsara ny alika zokinao ianao.
Alika maro no voatery an-tery ny zavatra sasany ary iray amin'izany ny mandeha an-tongotra. Ny tabataba mafy, ny toe-javatra tsy ampoizina na ny tahotra dia mety miteraka io fihetsika io., na ny fanahiana fisarahana afaka mandray anjara amin'izany ihany koa.
Rehefa mampiseho izany fihetsika izany ny alikao dia manandrana manala izay manelingelina azy na manova ny tontolo iainana. Miezaha hanelingelina azy amin'ny kilalao na zavatra hohanina ary aza sorohina ary "ampiononina" izy, satria hohamafisininao io fihetsika io ary ho hitany fa isaky ny manao izany izy dia mahazo loka.
Ilaina ny fampihetseham-batana amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana an'ny alika, nanomboka Ny alika tsy ampy fanatanjahan-tena dia afaka manomboka mandeha anaty faribolana mba hanamaivanana ny fahasosorana.
Diniho ny fitondrana azy any amin'ny tranon-kenna handany andro vitsivitsy isan-kerinandro milalao alika hafa ary mandany herinaratra ary tadidio, aza miady amin'ny alikao rehefa manomboka mandeha anaty faribolana izy, satria io fihetsika io dia fomba iray ilazany aminao fa misy zavatra diso. tsy maninona izy.
Ireo fifandonana amin'ny fitondran-tena rehetra ireo dia tafiditra ao anatin'ny foto-kevitry ny fitaintainanana, izay iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny alikantsika hitodika any aminy.
Raha mitebiteby loatra ny alikanao dia azo inoana fa ho hitanao koa ny karazana olana hafa amin'ny fihetsiny., izay mazàna adika amin'ny nibbling tsy an-kijanona ny zavatra ao an-trano, toy ny fanaka, na maheno azy ireo mivovo be loatra.
Ireo fihetsika ireo dia mety manana vahaolana ihany koa raha manitatra, araka izay tratra, ny diany izahay, koa ny alika dia manao fanatanjahan-tena bebe kokoa ary amin'ity fomba ity dia mamoaka ny fihenjanana sy ny adin-tsaina rehetra, hiatrehana ny toe-javatra any an-trano tsy misy fanahiana be.
Inona no mitranga raha tsy entina mandehandeha ilay alika?
Anisan'ireo lafin-javatra marobe izay mety hahatonga ny alikanao hanao fomba hafahafa ity, tokony ho raisinao ihany koa fa ny karazany tsirairay dia manana fari-pitondran-tena mitovy ary izany no mety ho antony lehibe mahatonga ny fihodinan'ny alika.
Midika izany ny alika misy karazana sasany dia manana karazana predisposition hanana an'io fihetsika io, izay ahafahantsika manasongadina ireo mpiandry ondry alemanina, izay, ankoatry ny fantatry ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny santionany dia mirona hihodina anaty faribolana, dia malaza amin'ny fanaovana lavaka lehibe koa.
Karazana iray hafa izay mirona hanana toetra mitovy amin'ny fomba fototarazo dia ny Bull Terrier, fa amin'ity tranga manokana ity, mazàna izy ireo dia manao làlana midadasika kokoa ao amin'ny faribolany ary haingana foana.
Rehefa alika no manao an'io fihetsika io dia amin'ny fotoana voatondro dia miafara amin'ny fampidirana azy io, very ny fahatsapana ny antony anaovany azy. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, manao azy toy ny mahazatra azy izy, fa tsy misy ifandraisany amin'ny fikarohana, na amin'ny zava-misy mitady zavatra manokana. Lasa fifampikasihan'ny biby avy eo fa, na dia tsy zavatra ratsy aza, dia mety hanjary fahazarana tsy soso-kevitra, indrindra raha manomboka mandratra tena izy.
Ohatrinona no mitranga izany fihetsika izany? Eny, mety hitranga izany raha tsy ampy ny sain'ny alika, izany hoe rehefa mankaleo izy dia mihidy foana, miady saina na mitebiteby, tsy manaitaitra na tsy milalao fotsiny. Amin'ireny tranga ireny, ho azy ireo dia lasa làlan-kivoahana ny fanaovana zavatra hafa.
Ny olana dia, amin'ny tranga maro, dia mety hanimba tena izy na handratra mafy ny tenany amin'ny fisamborana ny rambony. Azonao vonoina mihitsy aza izany. Noho izany, nanoro hevitra ny manam-pahaizana fa raha tsy mahazatra io fahazarana io, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny manatona mpahay etolojia hanafoana izany amin'ny fitondran-tenany.
Ny alika mitodika amin'ny tenany ary manaikitra ny rambony dia mety manana antony mahatonga azy ho toetra ara-batana ihany koa. Ary, amin'ity tranga ity, mety ho zava-dehibe izy io satria mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamanao izany. Ary izany dia, alika sasany, Rehefa manana olana amin'ny fihary ao izy ireo dia mampitombo io fahazarana io ho fomba hanalefahana ny tenany (satria ny ezahin'izy ireo atao dia ny mankany amin'io faritra io).
Mety hitranga izany noho ny aretina, katsentsitra tsinay, sns. ary eo amin'ireo soritr'aretina, ankoatry ny fahasosorana sy ny fivontosan'ny faritra anal, dia hisy ihany koa ny fisehoan'ny mangidihidy. Raha ny marina dia mety ho tonga ao an-tsainao izao ny sarin'ny alika mandady amin'ny vodiny. Na mety noho ny parasy atahorana, izay nisesy tao amin'io faritra io ary mamoaka filana hanakorontana izay miafara amin'ny manaikitra hahatratra izany faritra izany ary afaka manamaivana ny tenany.
Amin'ireto tranga ireto dia tsara ny hitondranao azy any amin'ny mpitsabo biby mba hahafahany manombatombana hoe inona ny aretina sy ny antony mahatonga azy io, mba hialana amin'ny olana ary hampiatoana izany fahazarana izany. Raha ny ara-dalàna ny zavatra hataonao dia ny fizahana ara-batana ilay biby, ary koa ny palpation ny faritry ny rambony mba hahitana raha nisy zavatra tapaka. Azonao atao koa ny manao fitsapana ra, fitsapana seza, na izy roa.
Nahita ny alikao ve ianao hatramin'ny alika kely izay nanodina ny tenany ary nanaikitra ny rambony ary nihomehy ianao? Efa nanao an'izany imbetsaka ve ianao ary efa nitovy ny fihetsikao? Ny alika dia mandeha lavitra ho an'ny tompony, ary midika izany fa raha afaka manao zavatra hahasambatra anao izy ireo dia hanao izany.
Noho izany, mahazatra ny alika sasany ny mamantatra an'ity hetsika ity amin'ny zavatra tsara, ary mianatra azy io ho fika hanintonana ny sainao ary miaraka amin'izay dia mampitsiky anao, na manome azy zavatra ho setrin'izany (safosafo, fitsaboana, sns.). Ankehitriny, manan-danja ny loza ateraky ny fanimbana ny rambonao. Ary na dia hitanao fa mahatsikaiky aza ity dia tsy maintsy miantoka ny fahasalamany ara-batana ianao.
Ny vahaolana dia amin'ny alàlan'ny ethologista, satria raha ny biby no nanao an'io fihetsika io ho mahazatra azy dia mila olona ianao hanitsy izany fihetsika izany raha tsy vitanao ny manao azy.
Antony tsy dia misy ifandraisany firy
Ny zava-misy fa ny alikanao mandeha anaty faribolana dia tsy famantarana foana izay tokony hisarika ny saintsika amin'ny fanahiana. Misy biby fiompy izay azo jerena amin'ny endrika tsara ary faly, nefa koa manao ireo karazana fihetsiketsehana ireo, tsy misy dikany zavatra manimba izany, fa resaka fitondran-tena mahazatra.
Azo antoka fa efa fantatrao ny fihetsika rehetra alikan'ny alikao ary raha fantatrao fa salama tsara izany, raha somary mitebiteby amin'ny ankapobeny izy dia tena azo atao ny mihazakazaka anaty faribolana amin'ny alàlan'ny fientanam-po, satria misy zavatra miteraka fanentanana iray manokana.
Ity toe-javatra ity dia azo aseho amin'ny fientanam-po izay asehon'ny ankamaroan'ny alika rehefa mandeha manipy baolina aminy isika haka azy io. Ho hitantsika fa ny fientanam-po ateraky ny alika dia ny hoe hivadika ho azy izany, amin'ny alàlan'ny fitaintainanana sy fifaliana amin'ny fifandraisana aminao sy ny filalaovana.
Tena kely izy io
Tahaka ny ilazanay anao fa rehefa antitra, ny fihodinan'ny alika dia mety ho antony mahatonga ny olana ara-pahasalamana, dia tokony homarihina ihany koa fa Raha manomboka mihodina ho azy ny alikanao dia aza matahotra be loatra satria tsy midika zavatra ratsy io fa ny fahaizan'ny kilalao kely.
Ny alika kely dia mazàna manana reflexe manenjika ny rambony, ary amin'ny fiezahana hahatratra izany dia hitodika imbetsaka ny tenany, amin'ny lafiny iray sy amin'ny ilany. Tsy maneho patolojia izany ary ho tsapanao fa lalao io.
Ny fitsangatsanganana amin'ny faribanan'ny alikanay dia tsy midika zavatra ratsy, raha tsy lasa miverimberina izy ireo ka midika fitsabahana amin'ny fiainany.
Inona no hatao raha antitra ny alikako ary mandehandeha manodidina?
Ny fitondran-tena mandeha amin'ny boribory dia mety tsy ho voamarikao amin'ny mbola kely raha, araka ny efa noresahintsika teo, ny zava-drehetra dia ampahany amin'ny lalao. Fa raha antitra ny alikanao ary mandehandeha manodidina, azo antoka fa patolojia fanta-daza antsoina hoe Cognitive Dysfunction Syndrome izy io.
Mba hahafantaranao ny fifandraisana akaiky eo anelanelan'ny aretina alika ity sy ny fahanteran'ny alika, dia azontsika atao ny manamarika fa io aretina io dia tena nitovy tamin'i Alzheimer, izay matetika ny olona no mijaly amin'ny fahanterana, sy ny lisitry ny soritr'aretina izay iaretan'ny alika avy dia lava be. Mety hijaly ianao amin'izany, fa ny iray amin'ireo fahita indrindra dia ny fanaovana fihetsiketsehana boribory.
Ny alika antitra izay mijaly amin'ity aretin-tsaina ity dia tsy azo sitranina, satria mandroso sy maharitra amin'ny taona. Saingy misy fitsaboana isan-karazany, ny sasany voajanahary, toy ny fiovana amin'ny fanaon'ny alika, mba hampifanarahana azy ireo mba hiatrehana tsara kokoa ny aretina ary amin'ny tranga hafa, matetika ny fampiasana fanafody sasany.
Fa maninona ny alika no tsy mijanona mandehandeha manerana ny trano?
Afaka mahita ny tenanao amin'ny toe-javatra maro tsy ahafahan'ny malalanao mitsahatra mandehandeha sy manodidina ny tranonao ianao. Ity, izay fihetsika tsy mahazatra azy taloha ary manintona ny sainao, mety hiteraka antony maro samihafa, voajanahary tanteraka ny maro amin'izy ireo, fa ny hafa kosa mety misy ifandraisany amin'ny olana amin'ny fahasalamanao na ny fiainanao izay tokony hitsaboana anao.
Izany no antony Manoro hevitra izahay fa amin'ny voalohany dia esory ny fisalasalana rehetra afaka mamono tena. Hamarino sao tsy mandehandeha mitady zavatra voasakana any ho any na miafina ao ambadiky ny fanaka iray, zavatra iray izay mahatonga azy ireo hijery matetika.
Raha mahita ny olana eo ianao dia efa nanadio ny fisalasalana momba ny aretina iray. Fa raha mitohy ny fihodinana manodidina ny tranonao, dia asaina mitsidika mpitsabo manokana momba ny veterinera ianao, mba hahitana diagnostika marina.
Mitodika any aminy ny alika ary manaikitra ny rambony
Mety io toe-javatra io no tokony hampiahiahy anao indrindra, satria ny alika mazàna no manao izany, indrindra raha alika kely izy ireo ary eo afovoan'ny fikarohana. Tsy mahagaga ihany koa raha mihodina ireo alohan'ny atsipy any ho any. Zavatra fanaon'izy ireo mahazatra izany.
Fa maninona ny alika no mandehandeha ary koa amin'ny boribory?
Ny fifampidinihana amin'ny mpitsabo biby manoloana ireo olana ireo no zavatra voalohany tokony hataonao, fa Raha mandehandeha ny alikanao ary mihodinkodina dia azo inoana fa mijaly amin'ny karazana aretina na aretina izy.
Anisan'ireo fahasahiranana mety hitranga amin'ny fomba mandeha an-tongotra ity, mety misy ny olana amin'ny fahamamoana, izay mahatonga azy hanao hetsika an-tsitrapo, ary koa afaka mifandray amin'ny kapila herniated ao amin'ny alika, izay manahirana azy ny mandeha.
Alika tsy rototra, mety ho antony mahatonga azy mandehandeha faribolana ve izany?
Rehefa antonony na antitra ny alikanay, dia mety hiharatsy ny vatan'ny neurônaly, izay miteraka ilay Syndrome Cognitive Dysfunctional voalaza etsy ambony. Ny fihenan'ireto neurotransmitter ireto dia mahatonga ny alika hiseho ho tsy misaina, zavatra mety hanjary henjana kokoa rehefa antitra.
Ity disorientation ity dia mety ho iray amin'ireo antony mivantana ny mandeha amin'ny faribolana mascot antsika.
Senile dementia, mety ho antony mahatonga anao mandeha anaty faribolana ve izany?
Tena dementia tokoa ny senile dia iray amin'ireo antony matetika maninona ny alika no manana izany fihetsika izany. Izany dia miseho amin'ny fahanterana ary matetika dia tampoka kokoa amin'ny alika izay lehibe, noho izy ireo mihantitra kokoa.
Ny dementia senile amin'ny ankamaroan'ny alika dia mahazatra matetika eo anelanelan'ny 10 sy 11 taona, fa amin'ny alika lehibe dia mety hitranga aorian'ny 7 taona.
Aretina mety hahatonga ny alikako hitety faribolana
Ho fanampin'ny fifandonana amin'ny fitondran-tena rehetra izay noresahinay, dia misy koa aretina hafa na aretina hafa mety hahatonga ny alikanao handeha anaty faribolana ary ireto avy ireto:
Fihetseham-po amin'ny zava-mahadomelina
Mety io toe-javatra io no tokony hampiahiahy anao indrindra, satria ny alika mazàna no manao izany, indrindra raha alika kely izy ireo ary eo afovoan'ny fikarohana. Tsy fahita firy koa ireo raha mihodina alohan'ny manipy ny tenany any ho any. Zavatra fanaon'izy ireo mahazatra izany.
Ny alikako dia mihodina ary milatsaka
Ny fahaverezan'ny fandanjalanjan'ny alika anao Mety ho olana manokana eo amin'ny sofinao ao anaty izany, izay matetika antsoina hoe aretina. Ho hitanao io fisehoana io ho mariky ny fitarainana momba ny fanaintainana.
Ny antony iray hafa dia mety Vestibular Syndrome amin'ny alika. Toetra iray izay matetika mitranga amin'ny alika antitra ary misy soritr'aretina maro, anisan'izany ny fianjeran'ireo biby fiompintsika tampoka.
Ny alika dia mampiseho rafitra iray izay iarahan'ny hozatra vestibulo-cochlear sy ny sofina ao anatiny, mifandray amin'ny faritra samihafa amin'ny rafi-pitabatabana afovoany, antsoina hoe Vestibular System.
Ny fiasa tsy marina amin'ny iray amin'ireo faritra ireo dia izay miteraka Vestibular Syndrome, izay dia mety hitranga amin'ny alika amin'ny taona rehetra ary mahita antony miteraka otitis maranitra sy hypothyroidism, maneho ny tsy fahampian'ny soritr'aretina.
Anisan'ireny soritr'aretina ireny ny loha mitongilana, ny tsy fanjanahana, ny fahaverezan'ny fifandanjana, ny fahasarotana amin'ny fihinanana, ny fitsentsenan-kanina na ny fivalanana, ny fidorohana ary ny fahasosoran'ny hozatry ny sofina anaty ary ny fandehanana anaty faribolana ankoatry ny maro hafa.
Rehefa mety hiteraka ahiahy manodidina izany
Araka ny efa noresahintsika teo aloha dia ilaina foana ny fifampidinihana amin'ny mpitsabo biby, hahafantarana raha manahy na tsia ny fandehanana anaty faribolana. Raha sendra izany, vokatr'io soritr'aretina io dia mahita ny sarin'ny dementia sy ny soritr'aretin'ny vestibular ary ny fihenjanana rehetra mety haterin'izy ireo amin'izy ireo, izany no olana amin'ny ahiahy indrindra sy ny fitsaboana marina ary haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » curiosities » Fa maninona ny alikako no mihodina anaty faribolana?
Nanomboka nanao an'io ny alikako iray volana lasa izay, mandehandeha izy, tsy haiko hoe mijanona izany satria mijanona tsy mahita azy aho ary tsikaritro koa toa tsy hitany hoe maninona izy no tafintohina amin'ny zavatra, izany hoe tsy ara-dalàna fa aretina ihany io raha tsy misy mahasosotra anao, efa elaela izay no nanorenan'izy ireo trano ao aoriako ary raha ny fahitako azy dia mitabataba tontolo andro dia mety ho izany ary azo antoka fa meloka aho satria Aza esorina an-tongotra izy ity fa manana alika hafa mampiaraka azy izahay fa miharihary fa tsy maninona izany, tsy haiko raha azo hatsaraina na hositranina amin'ny fitsaboana kely sa tsia?